Kedu mkpụrụ osisi nwere ntakịrị shuga? - Ihe Oriri
Isi > Ihe Oriri > Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri kachasị dị ala - ihe ngwọta bara uru
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri kachasị dị ala - ihe ngwọta bara uru
Kedu mkpụrụ osisi nwere ntakịrị shuga?
Ala-mkpụrụ osisi shugagụnyere:
Strawberries. Strawberries, dị ka ọtụtụ mkpụrụ osisi ndị ọzọ, na-enwekarị eriri nanweredị ntakịrịshuga.
Piich. Ọ bụ ezie na ha na-atọ ụtọ ụtọ, ọ bụ naanị obere peachnweregburugburu 13 g nkeshuga.
Lemọn na wayo.
Mmanụ aeyụ na mmanụ aeyụ.
Mkpụrụ osisi grepu.
Ọ dị ka akụkụ dị mfe, mkpụrụ osisi nwere shuga, yabụ mkpụrụ osisi nwere carbohydrates, yabụ mmadụ nwere ike iche na a ghaghị izere mkpụrụ osisi niile na nri keto .N'ụzọ dị mma maka ndị hụrụ mkpụrụ osisi n'anya, ọ bụghị ezigbo nke sliced ​​na akọrọ. Ekwesịrị ịhapụ mkpụrụ osisi na obere nri nri Carbohydrate, mana ụfọdụ dị mma na imeru ihe oke, ka anyị lelee mkpụrụ osisi nwere ike ịnụ ụtọ dị ka akụkụ nke nri Aketo na nke nwere ike izere ketosis gị siri ike.
Enwere ike iri mkpụrụ osisi sitere na mkpụrụ osisi mara mma ma ọ bụ nke ọzọ ma ọ bụ nke ọzọ ejiri ya na usoro nri Ka anyị leba anya na mkpụrụ osisi kachasị mma ịhọrọ mgbe ị na-eme keto ebe mkpụrụ osisi ụfọdụ nwere carbohydrates zuru ezu na ọbụlagodi otu mpempe na-eme ka nri carb gị zuru ezu maka ụbọchị ahụ, ụfọdụ nwere obere obere shuga mgbe ịchọrọ ịbịaru mkpụrụ osisi Ndị a bụ mkpụrụ osisi ịchọrọ maka mkpụrụ osisi Strawberries Blackberries na raspberries bụ onye ọ bụla ikwu obere shuga na-atọ ụtọ mkpụrụ osisi nwere ihe dịka 5.68, 4.9 na 5.4 fornet carbohydrates, karị, kwa ihe 3/4 Ije ozi.
Berry juputara na ihe oriri, ha juputara na vitamin, mineral na antioxidants, ụfọdụ ọmụmụ jikọtara mkpụrụ osisi na mbelata mbufụt, iweda cholesterol na ibelata ọrịa obi. Mkpụrụ osisi Star bụ mkpụrụ osisi na-ekpo ọkụ na-atọ ụtọ nke na-eme nnukwu mgbakwunye na nri keto. Mkpụrụ osisi kpakpando nwere mkpụrụ osisi mara mma nke 3.93, ha dị ụtọ nke ukwuu na anụ ụtọ na-atọ ụtọ nke dị n'etiti apụl na mkpụrụ vaịn, nke nwere ụtọ dị ụtọ na uto, dị elu na fiber na vitamin C ma na-enye ọtụtụ ndị ọzọ ahụ ike. uru mgbe ịkpụ ya nwekwara ọdịdị kpakpando mara mma nke na-adị mma na salad.Avocados bụ nri keto nke ukwuu maka nnukwu abụba ha, obere protein ha na obere ọdịnaya carbohydrate, na-eme ha nhọrọ nhọrọ nri kachasị mma maka onye ọ bụla na-achọ obere carb Diet. Soro na-agbakwụnye na ọ dị oke abụba na-edozi ahụ ike, nnukwu potassium karịa banana, n'ihi na ọ nwere ike ịbawanye ụba nke antioxidants na-soluble abụba ị nwere ike inweta site na nri sitere na osisi, mkpụrụ osisi keto zuru oke Naanị 1 isi 8 4 grams nke net carbohydrates kwa ọkara ube oyibo ị pụrụ ịnụ ụtọ ha free ube oyibo egg Ne nke anyị mmasị Vorite keto oriri nwere ike ụtọ ghọọ keto ice ude ma ọ bụ savory ụtọ na a n'akụkụ nri nke guacamole ma ọ bụ a tomato taco salad, mgbe ọtụtụ ki tchens na-emeso tomato dị ka akwụkwọ nri, na tomato nwere ike tinye ha elu, ọkachasị mgbe ha na-esi nri Ebe ọ bụ na ha bụ nnukwu mmiri ma nwee ike sie nri dị elu nke carbohydrates, Melons Melons yiri ka ọ dị na njedebe dị ụtọ nke ụdịdị dị iche iche, mana ọtụtụ melons n'ezie nwere ihe ịtụnanya dị obere nke carbohydrates na 100 gram nke anyụ, nke nwere akara asaa na otu gram nke netwọk ise nke Melon na-atụle ntụpọ asaa na itoolu gramị mmanụ awụ bụ akara asatọ na gram atọ dịka mkpụrụ osisi ndị ọzọ attentionaa ntị na ole ị na-eri ọ dị mfe ịfefe , ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere agụụ shuga, na-eji akpịrịkpa kichin mgbe niile iji tụọ ma lelee ịdị arọ nke akụkụ gị Ihe nrịba nke carbohydrate ọzọ Olive Bo Chicken na nnu oliv abụghị ihe mbụ na-eme n'uche mgbe ị na-eche maka mkpụrụ osisi, mana ha bụ otu. nke mkpụrụ osisi kachasị-enyi na enyi n'ebe ahụ, e nwere naanị isi atọ na otu net carbohydrates na ihe dị ka mkpụrụ oliv ojii 25 nke na-eme ka ha bụrụ ezigbo mmadụ choicehọrọ maka nri mgbe ị na-achọsi ike e ihe bara ụba na nnu, mkpụrụ osisi ndị ọzọ dị ka apụl, unere, mkpụrụ vaịn, piich, kiwi na oroma bụ n'ezie ihe kacha mma maka ịhapụ keto maka ndepụta zuru oke nke mkpụrụ osisi ịhọrọ na nke ga-ahọrọ ga-asị mba iji jide n'aka ịgụ isiokwu banyere mkpụrụ osisi kachasị mma nke mkpụrụ osisi kpụidere bepụ ihe niile Na keto, ọ bụrụ na ị hapụ mkpụrụ osisi na nri gị, ị ga-eri ọtụtụ akwụkwọ nri na mineral nke akwụkwọ nri na-eme ka mkpụrụ osisi bụrụ ihe na-adịghị mkpa, mana mgbe ị na-achọ ọfụma. mpempe mkpụrụ osisi na-ebili, soro ntuziaka anyị na ị gaghị emehie ihe ozugbo ị nwetara ọkacha mmasị gị keto-friendly n mkpụrụ osisi amata.
Chọpụta usoro nchekwa data dị ukwuu nke Ruled.Me nwere mkpụrụ osisi na-atọ ọchị iji nwee ọ .ụ
Kedu akwụkwọ nri nke nwere ntakịrị shuga?
Obere akwukwo nri shugagụnyere mushrooms bọtịnụ ọcha, watercress, inine, letus, beet griin, kale, epulite, celery, na broccoli. Ha na-abanye na yainwe0 - 2.3 grams nkeshugakwa otu. Nke ahụ bụ ihe dị ka ọkara ngaji ihe kachasị. g.
Olee mkpụrụ nke kachasị nwee shuga?
Kedu mkpụrụ osisi nwere ọtụtụ shuga?
Pịgharịa gaa na ala iji gụọ ihe niile. 1 / 13. Mangoro.
2 / 13. Mkpụrụ vaịn. Iko ndianwereihe dị ka gram 23shuga.
3 / 13. Cherị. Ha dị ụtọ, ha weenweeiheshugaigosi ya: Iko hanwere18 gram.
4 / 13. Ube.
5 / 13. Anyụ.
7 / 13. Unere.
8 / 13. NtaSugar: Avocados.
Na mbido afọ a, emere m edemede banyere etu ị ga-esi belata shuga agbakwunye na nri gị. N'isiokwu a, ekwuru m banyere nri ndị esichara na etu ha si nwee shuga. Taa achọrọ m igosi gị ego ole ahụ bụ, yabụ, m ga na-eje ije gị site na nri iri nwere shuga - nri ndị nwere shuga karịa ka ị chere, m ga-ekwukwa banyere ndị ọzọ dị mma na ngwaahịa ndị ahụ.
Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị nwere mmasị na ya, nọgide na-ele anya. Ndewo Ndewo! Nabata na ndụ obi ụtọ niile. Aha m bụ ria.
Ya mere, anyị ga-ekwu maka nri shuga, mana tupu anyị abanye na ya, anyị kwesịrị ịkọwa ụdị ụdị shuga bụ nsogbu yana ntuziaka Organizationtù Ahụ Ike Worldwa. Ya mere, Healthtù Ahụ Ike Worldwa na-atụ aro ka ị belata sugars agbakwunyere na sugars gị n'efu. Ya mere, gịnị bụ ihe ndị a kpọmkwem? Ka m kọwaa ntakịrị.
Ihe agbakwunyere na sugars n'efu gụnyere shuga nke ndị nrụpụta nwere ike ịgbakwunye. Yabụ ndị na-emepụta ihe ndị na-eme nri. Ma ọ bụ shuga nke enwere ike ịgbakwunye site na osi nri ma ọ bụ nke gị dị ka onye na-azụ ahịa.
Nke ahụ gụnyere shuga na-enweghị eriri na nri mbụ. Ka m gosi gị ụfọdụ ihe atụ ka ị nwee ike ịghọta n'ezie ihe shuga ndị a bụ. Ihe omuma nke shuga ndia bu ihe di ka okpokoro okpokoro, ya mere obu ihe ndi ozo.
Nọrọ naanị Glucose. Dịpụrụ adịpụ fructose. Mmanụ aeyụ bụ ihe ijuanya na ndepụta ahụ, ọtụtụ ndị chere na mmanụ a honeyụ dị mma, mana dịka Healthtù Ahụ Ike Worldwa, ọ bụ ihe ga-ejedebe.
Ọzọkwa sirop - nke ahụ ga-abụ ihe dịka syrup maple, sirop osikapa aja aja. Ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi na ihe ọ juiceụ fruitụ mkpụrụ osisi na-etinye uche. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụ ezie na Healthtù Ahụ Ike Worldwa na-atụ aro ịmachi shuga n'ihe ụfọdụ, ọ kwadoghị ịmachi shuga na nri niile.
Ugbu a na ị maara ụdị ụdị shuga ị ga-ezere ma belata, ka anyị kwuo maka ụkpụrụ nduzi. Ka anyị kwuo banyere nọmba. Healthtù Ahụ Ike Worldwa na-atụ aro ka ọ dịkarịa gram 50 nke shuga kwa ụbọchị.
Ya mere, ha na-atụ aro ịnọ n'okpuru oke a, mana maka uru ahụike ọzọ, ha na-akwado ịnọ n'okpuru 25 gram kwa ụbọchị, nke a bụ ihe m ga-atụ aro. Kpamkpam nọrọ n'okpuru ọnụ ọgụgụ a - gram 25 kwa ụbọchị bụ nke kachasị m. M na-agbakarị ịnọ n'etiti 0 na 5.
Ahụrụ m chocolate n'anya n'anya ka m wee tinye sugar, mana m na-anwa idebe ya obere ka o kwere mee. Nri shuga nke mbụ bụ yogọt. Ya mere, nke a nwere ike ịbụ ngwaahịa mmiri ara ehi ma ọ bụ ngwaahịa na-abụghị mmiri ara ehi.
Ọtụtụ ndị nrụpụta na-agbakwunye shuga iji mee ka ọ dịkwuo mma n'ihi na yogọt bụ acidic. Ọ bụghị mmadụ niile na-enwe mmasị na uto ahụ, ya mere a na-agbakwunye ọtụtụ shuga. Dị ka ihe atụ, Achọrọ m ikwu banyere nke a strawberry bred.
Ọ dị na Canada. M na-enyocha aha njirimara n’ihi na achọghị m imenye ụlọ ọrụ ihere. Nke ahụ abụghị nzube nke edemede a.
Ana m eme nke a dịka ọmụmaatụ. Ya mere, nke a strawberry bred - a na-eje ozi ya nwere banyere 19 grams shuga. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị enwe gram 19 nke shuga, agbakwunye shuga niile.
Yogurt nwere shuga n’enweghi nsogbu ma obughi nkpuru ahihia nke bu nsogbu, kama o gbakwunye sugar. Ya mere, ego shuga agbakwunyere na yogọt a bụ ihe dịka gram 10 na nke ahụ bụ 40% nke agbakwunye shuga nke gram 25, yabụ ọ bụ akụkụ mara mma nke oke. Ugbu a ọ bụrụ na anyị na-anwa belata shuga shuga dị na nri gị, enwere ụzọ ndị ọzọ.
Aga m akwado yogọt dị ka ihe ọzọ dị mma. Nke a nwere ike ịbụ mmiri ara ehi ma ọ bụ enweghị mmiri ara ehi dabere na ihe ị na-eri ma tinye mkpụrụ osisi ọhụrụ n'elu. Isi ihe na-esote bụ ogwe osisi granola.
Ya mere ogwe osisi granola bụ ihe oriri na-atọ ụtọ, ama ama ihe oriri ụtụtụ ama ama.
Enwere m ogwe osisi agranola kwa ụbọchị, mana ha bụ isi iyi shuga na nnukwu nnukwu shuga. Dịka ọmụmaatụ, enwere m oat na ọchịchịrị chocolate granola mmanya na gram 12 nke shuga agbakwunyere, nke bụ ihe dịka 50% nke njedebe gị kwa ụbọchị. Kedu ihe ndị ọzọ ị ga-eme? Aga m akwado ka ịnwale ịme ụlọ mmanya granola n'ụlọ mgbe ịnwere oge.
Enwere otutu nri nke obere shuga na Pinterest. Nọmba atọ bụ chocolate chocolate. Abụ m onye na-agba ọchịchịrị nke chocolate chocolate.
Ọ bụ ihe m nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla, mana ọ dị ezigbo mkpa ịmara na ọ bụghị agba ọchịchịrị gbara ọchịchịrị ka ya. Dịka ọmụmaatụ, enwere m ụdị abụọ nke chocolate chocolate. I nwere gram anọ agbakwunyere shuga maka iri nri gram 30, nke bụ ihe dị ka square atọ nke gbara ọchịchịrị chocolate. Oghere buru ibu 3 na akara nke ọzọ nwere gram 16 nke gbakwunye shuga maka otu mkpụrụ chocolate.
Nke ahụ dị okpukpu anọ karịa nke ọzọ, n'agbanyeghị na ọ bụ chocolate chocolate! Ọ bụrụ na ị nwere ọchịchịrị chocolate na gram 16 nke shuga, ị ga-anọ ihe dịka 60% nke oke gị. Nnọọ ọtụtụ. Yabụ, ọ bụrụ na ị hụrụ ọchịchịrị gbara ọchịchịrị n'anya na ị nweghị ike iche n'echiche ịhapụ ya na ndụ gị, ị nwere usoro ndị ọzọ ahụike.
Nwere ike ịnwale chọkọleti gbara ọchịchịrị bụ nke gbara ọchịchịrị gbara ọchịchịrị. Ya mere mụta ịgụ akwụkwọ ahụ ma gaa chocolate chocolate na 85% na ndị ọzọ. Nọmba nke anọ bụ nri ụtụtụ.
Muesli bụ nri ụtụtụ kachasị amasị m. Ọ dị mfe, ọ bara uru. .
Agbanyeghị, a na-edozi ya ma nwee ọtụtụ shuga, yabụ ịgụ aha mmado dị ezigbo mkpa. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere mmanụ a thisụ na oat granola sitere na ụlọ ọrụ ị nwere ike iche na ọ gaghị agbakwunye oke shuga, mana chee gịnị? Otu ọkara iko granola nwere gram 14 nke shuga gbakwunyere, nke bụ ihe dịka 60% nke njedebe gị kwa ụbọchị. Kedu ihe ndị ọzọ ị ga-eme? Aga m akwado ma ị na-ahọrọ granola nke dị oke ala ma ọ bụrụ na ịchọrọ ngwaahịa ngwaahịa.
Gụọ aha mmado. Choo ihe n’enweghi oke shuga n’ime ya. Agbanyeghị, echiche kachasị mma n'echiche m bụ ịrapara na nri ụtụtụ zuru ezu.
Dị ka m kwuru na mbụ, Healthtù Ahụ Ike Worldwa na-ele anya na ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi na ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi sitere na uche, yana sugars n'efu. Ọ bụ ihe mgbochi na ihe kpatara nke a bụ na mgbe anyị nwere ihe ọ juiceụ juiceụ mkpụrụ osisi anyị anaghị enweta eriri site na nri mbụ. Eriri a dị ezigbo mkpa n’otú ị ga-esi banye shuga na mkpụrụ osisi ahụ.
Nke ahụ bụ ọnọdụ nke Healthtù Ahụ Ike Worldwa. Ọ bụghị naanị àgwà ha. Dr.
Nke na-atọ ọchị, onye ama ama ama na mpaghara ahụike dịka onye na-anabata shuga, enweghị nsogbu na mkpụrụ osisi dum, mana o nwere nsogbu na mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi n'ihi na ọ bụchaghị ka iri mkpụrụ osisi niile. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmatakwu banyere ihe kpatara ya na ntakịrị karịa gbasara sayensị, enwere m karịa na nkọwa dị n’okpuru. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ihe ọ appleụ juiceụ apụl a.
Enwere ihe dị ka millilit 350 nke ihe ọ juiceụ juiceụ apụl na nke a nwere gram 49 nke shuga. Nke ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 200% nke oke n'ihi na ọ bụ okpukpu abụọ. Emere ya site na apụl ọtụtụ mmadụ ga-eche na ọ dị mma, mana Healthtù Ahụ Ike Worldwa na-atụ aro ka belata shuga dị na mmiri mkpụrụ osisi.
Ọ bụrụ na ihe ọ juụ juụ na-amasị gị ọ bụrụ na ịchọrọ ị drinkụ mkpụrụ gị na mmiri mmiri, m ga-akwado ndị na-eji ire ụtọ.
Ezigbo nri smoothies. Mkpụrụ niile na-abanye ebe ahụ. Gaghị tufuo eriri.
Benefit ga-enweta uru zuru oke na ya. Ọ dị mma karịa ịnwe ihe ọ juiceụ juiceụ. Nọmba 6 bụ ogwe protein.
N'ihi ya, ogwe protein aghọwo ihe na-ewu ewu. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ha bụ nri ọzọ dị mma na nri ndị ọzọ, mana nke ahụ abụghị ikpe na ogwe protein niile. Ihe ọzọ iburu n'uche bụ na e mebere ndị na-eme egwuregwu protein na ndị na-eme egwuregwu n'uche - a naghị ezube ha maka onye nwere ọrụ oche.
Yabụ, belụsọ ma ị bụ onye na-arụsi ọrụ ike, oke shuga dị na ogwe protein ndị a nwere ike ịdị ntakịrị oke oge ụfọdụ. Ya mere na-agụ na kpọọ mgbe nile. Dịka ọmụmaatụ, enwere m mmanya protein flavored protein.
O nwere gram 21 nke agbakwunye shuga site na isi mmalite dị iche iche. Ga - enweta ihe dịka 80% nke oke ụbọchị gị. Nke ahụ dị ọtụtụ. 80% nke oke ụbọchị gị! Nkwado m bụ) Gụọ aha mmado ahụ.
Ọ bụrụ n’inwere ike ịchọta ogwe protein na obere shuga na ihe ndị ka mma, maọbụ ọ bụrụ na ị na-enwe mmasi, ị nwere ike ịmebe protein gị site na isi nri niile. Enwere ọtụtụ, ọtụtụ Ezi ntụziaka na Pinterest. Na-esote anyị nwere barbecue sauce na ketchup.
Ya mere, ihe oriri na achicha na ketchup nwere ntakịrị sugar agbakwunyere na nke ahụ bụ n'ihi na naanị tomato isi ihe dị na mmiri ndị a bụ ezigbo uto, n'ihi ya, ọ naghị edetụ ihe kachasị mma.
Ọ na-adịtụ ntakịrị ntakịrị ụtọ, yabụ ndị na-emepụta tinye shuga. Ọ dị ezigbo mkpa ịgụ aha mmado n'ihi na ọ bụghị ketchups niile, ọ bụghị ihe eji eme achịcha niile ka emepụtara. Dị ka ihe atụ, enwere m ihe oriri mgbe niile ebe a, ma ọ bụrụ na ị ga-enwe tebụl abụọ, nke a na-ewere dị ka onye na-eje ozi, ọ ga-abụ ihe dịka gram 11 nke shuga na gram gram 10 na-agbakwunye.
Nke ahụ bụ 40% nke njedebe gị kwa ụbọchị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị hụrụ ketchup n'anya n'ezie ma nwee karịa tablespoons abụọ. Yabụ kedu nhọrọ ndị ọzọ? Dị ka ndị ọzọ, ị nwere ike ịga maka ụdị ketchup nke nwere obere shuga - yabụ gụọ aha gị ma jiri ụdị dị iche iche tụnyere ya, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ezigbo mmasị, mee nke gị.
Ọzọ ọtụtụ na ọtụtụ Ezi ntụziaka na Pinterest ma ọ bụ na ị nwere ike ịhapụ ngwa nri shuga kpamkpam ma lekwasị anya na ngwa nri na-enweghị shuga. Dịka ọmụmaatụ mọstad, ihendori na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ahịhịa ahịhịa. Mmiri ara ehi na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya na mgbe ọ na-enweghị ngwaahịa mmiri ara ehi - nke a bụ ihe agbakwunyere maka onye na-adịghị anabata ma ọ bụ na-agba mbọ belata ngwaahịa mmiri ara ehi, mana ọtụtụ n'ime ha agbakwunyela shuga.
Dịka ọmụmaatụ, enwere m vanilla flavored almọnd mmiri ara ehi na ọ dịghị amasị nke a bụ chocolate, mana ụtọ a vanilla. Otu iko na-eje ozi nwere gram 16 nke gbakwunye sugar. Nke ahụ dị ukwuu! Nke ahụ bụ pasent 60 nke oke gị.
Dị ka ihe ọzọ, ana m akwado ka ị mee mmiri ara ehi gị n'ụlọ ma ọ bụ zụta mmiri ara ehi na-enweghị atụ. Ọtụtụ ndị na-eche yogọt na sorbet oyi kpọnwụrụ bụ nhọrọ ka mma karịa ice cream. N'ikwu eziokwu, ọ ka nwere ntakịrị ihe shuga agbakwunye.
Dịka ọmụmaatụ, enwere m ọkara iko nke yogọt vanilla nke nwere ihe dị ka gram 9 nke shuga dị na ya, mana ka anyị chee ya ihu, mmadụ ole n'ime anyị ga-enwe ọkara iko yogọt kpụkọrọ akpụkọ? Ma eleghị anya, ọ bụghị ọtụtụ n’ime anyị! Ọtụtụ n’ime anyị ga-enwe iko. Yabụ ọ bụrụ na ịnwere iko nke ga - abụ ihe dịka gram gram iri na asatọ - nke dị ọtụtụ. Ọ dị nso na njedebe gị.
Maka ndị ọzọ dị mma, m ga-akwado ịrapagidesi ike goodies zuru oke. Enwere ụfọdụ ntụziaka na Pinterest maka ihe ndị dị ka ice cream banana friji, ice cream friji na osisi, na ihe ndị yiri nke ejiri mkpụrụ osisi dum. Nọmba 10 bụ tii nwere kọfị nwere kọfị nwere kpụrụ oyi.
Yabụ nke a nwere ike ịbụ ihe ịzụrụ ma ọ bụ karama si n'ụlọ ahịa kọfị. Dịka ọmụmaatụ, enwere m kọfị nwere kọfị site na kọfị, nke bụ kọfị nwere akpụrụ mmiri. 20 grams nke gbakwunyere shuga, nke bụ 80% nke njedebe gị.
wuo okpokoro gi
Yabụ dị ka nke ọzọ ahụike, m ga-akwado ịrapara na kọfị nwere akpụrụ mmiri na-adịghị atọ ụtọ. Ọ bụ ezie na imirikiti nri nri shuga iri dị na ndepụta m adịghị anọ n'ofe, ị drinkingụ abụọ ma ọ bụ atọ n'ime ha n'otu ụbọchị ga-agabiga oke oke gị. Ka m gosi gị ihe atụ na-agbakwunye ihe dị ka gram 61 nke shuga.
Nke ahụ dị mma karịa ụkpụrụ oke abụọ nke Healthtù Ahụ Ike Worldwa. Na ụbọchị ahụ adịghị agụnye mmanya ma ọ bụ kọfị nwere kọlọji ma ọ bụ ihe eji megharịa ọnụ! Yabụ n'ụbọchị ndị a, mmadụ nwere ike iche n'echiche etu ọnụ ọgụgụ ahụ ga-adị. Ikekwe ihe karịrị otu narị gram nke gbakwunye shuga.
Ebumnuche m bụ na ọtụtụ nri esichara agbakwunyela shuga ma ọ dị oke mfe ịkwụsị oke. Daalụ maka ilere edemede a. Olile anya na ichoputara na ihe omuma ya na ebumnuche ahu abughi ime ka i ju gi anya, kama ka o kuziere gi ma kuziere gi ka i nwee ike ime mkpebi nke gi.
Aga m ahụ gị n'isiokwu na-esonụ. Ka ọ dị.
Kedu mkpụrụ osisi shuga na carbs dị obere?
Etu esi egbutu: Ogbe
Tomato. Tomato bụ nhọrọ a ma ama maka ndị mmadụ na-ele hakabuoriri.
Kantalup. Egwuregwu oroma a na-ewu ewu dị ukwuu na ụbọchị anwụ na-ekpo ọkụ ma nwee naanị 8.16 gkabohaidretna 0,9 g nke eriri kwa 100 gmkpụrụ osisi, naanị netting 7,26 g nkekabohaidret.
Kedu Apple kachasị mma?
Otu n'imena-edozi ahụnkịtịapụl, Granny Smithapụlnwere ugboro 13 karịa phytonutrients karịa Ginger Gold, ka Robinson kwuru.10.30.2013
Kedu Apple nwere obere shuga?
Anapụlotu ụbọchị dị ka ugboro abụọ maka mkpụrụ osisi. Royal gala na mmanụ a honeyụ crisp nwere ikenwere19 gram nkeshuga, ma akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụapụl, dị ka granny smith,nwere9 gram.10.01.2019
Mkpụrụ vaịn bụ mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ?
Ya mere, gụọ iji chọpụta nkemkpụrụ osisinwere shuga kachasị - mana buru n'uche na ọ bụghị nnukwu ihe. N'ime iko nke kemmiri ihe, uhiemkpụrụ vaịn, ị ga-ahụ gram 15 nke shuga. Fọdụmkpụrụ vaịndị ụtọ karịa ndị ọzọ - swiiti owumkpụrụ vaịn, dịka ọmụmaatụ, nwere ụzọ shuga. Nke ahụ bụ ihe na-enye ha ọmarịcha ụtọ ụtọ ha.Jenụwarị 29. 2018 Nov.
Kedu mkpụrụ osisi carbohydrate dị ntakịrị?
Anyụ, ụtọ n'oge okpomọkụ na-emeso, bụ 92% mmiri nanke kasị ala-mkpụrụ osisi carbOzo, na 7.5carbsmaka 100 gram ọ bụla. O nwekwara otutu vitamin A na C. Kporie otu iko, ma ọ bụ bọọlụ 10 mmiri ma ọ bụrụ na ọ na-adị gị mma.Eprel 14 2020
Kedu nri ndị enweghị carbs?
Nrina -a drinksụ ihe ọ allowedụ allowedụ na aọ bụghị-nri carbgụnyere anụ, azụ, àkwá, cheese, bọta, mmanụ, mmiri, na kọfị nkịtị ma ọ bụ tii. Ọ bụrụ n’inweghi nsogbu, ị nwekwara ike iri mkpụrụ, mkpụrụ, akwụkwọ nri na-abụghị starchy, yana mkpụrụ osisi nwere abụba dị ka ube oyibo na aki oyibo ebe a.nridịdị alana netcarbs.June 25. Dec 2019
Kedu ihe bụ akụkụ ahụ ike kachasị mma nke àkwá?
Ke ofụri ofụri, ndị na-acha ọchaakụkụnkeakwabụ isi iyi kacha mma nke protein, nwere obere kalori dị obere. Naakwankochi ime akwa na-ebu cholesterol, abụba, na nnukwu nke calorie zuru oke. O nwekwara choline, vitamin, na mineral.
Gịnị mere Apple ji nwee mkpụrụ osisi kachasị mma?
Apụlbụ ezigbo isi iyi nke vitamin C (a antioxidant nkịtị namkpụrụ osisi). Ha nwere nnukwu mineral potassium; nke na-eme iheapụldị mma maka obi gị.Apụldị elu na ọdịnaya nke antioxidants dị iche iche. Antioxidants ndị a bụ maka ọtụtụ uru ahụike.
Kedu ụdị mkpụrụ osisi nwere obere shuga?
Tomato bụ nhọrọ ọzọ nwere ọgụgụ isi maka mkpụrụ osisi shuga dị ala; bluuberi nwere gram 14.7 nke shuga kwa iko, blakberị nwere gram 7.03 na mkpụrụ osisi strawberries nwere gram 7.43. Cantaloupe, plums, tomato, avocados na guavas bụ nhọrọ mkpụrụ osisi obere-shuga ndị ọzọ. Imirikiti akwụkwọ nri anaghị enwe shuga, nke a na-egosi site na enweghị ụtọ ha.
Enwere mkpụrụ osisi na osisi vegri dị obere na carbs?
Na mgbakwunye na inyefe ahụike ndị a, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ dịkarịsịrị abụba na calorie, nke nwere ike ime ka ha bụrụ nhọrọ na-adọrọ mmasị maka ndị na-ele ịdị arọ ha. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-eri nri nwere ike ịkpachara anya banyere ha ma ọ bụrụ na ha na-anwa ịkpụ carbs. A sị ka e kwuwe, mkpụrụ osisi na vegri nwere ọtụtụ shuga na carbs?
Kedu nke anaghị eri anụ kacha mma oriri?
Akwụkwọ nri kwesịrị ịbụ otu n’ime nri anaghị eri shuga. Ọ dị elu na eriri, calcium, ọ naghị ebulikwa ogo shuga shuga gị otu ntakịrị ọbụlagodi mgbe ị na-eri ihe dị ukwuu. Otu iko nke akwụkwọ nri inine na-enye gị gram 1.1 nke carbs, gram 4.3 (nke otu ụzọ n’ụzọ atọ bụ nke nwere ike ịgbari), yana naanị gram 0.4 nke shuga eke! 10. Guavas